Dhageyso Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Gobalka Bakool. – Bogga Calamada.com
Dhageyso Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Gobalka Bakool.
Wararka ka imaanaya gobalka Bakool ee dhanka Konfur Galbeed Somali ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay qeybo ka mid ah gobalkaasi uu ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Dagaalka waxa uu dhex maray ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin iyo maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka’iyadoona dagaalka uu ka dhacay mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Xudur ee gobalka Bakool.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii maleeshiyaatka Murtadiinta oo kasoo baxay degmada Xudur ay isku dayeen iney dhac ka geystaan deegaan hoostaga degmadaasi balse arintaasi waxaa dagaal kaga hor tagay ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Idaacada Islaamiga ah ee Andalus ayaa baahisay in dagaalkaasi khasaara culus lagu gaarsiiyay maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka.
Halkan Ka Dhageyso Warbixinta Dagaalka.